Mahdi Guuleed “Muranka badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib dhageysigii. Waxaan sugeynaa go’aan caddaalad ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Mahdi Guuleed “Muranka badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib dhageysigii. Waxaan sugeynaa...
Mahdi Guuleed “Muranka badda waxaa dhameystiri doona ICJ kadib dhageysigii. Waxaan sugeynaa go’aan caddaalad ah.
Saacado kadib warar soo baxayay oo sheegayay in Dowlada waqtigeeda dhamaday ay ka laabatay arintii Bada ee Kenya kala dhaxaysay, waxaa arintaas ka hadlay Raisal wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed.
Mahdi ayaa sheegay inaysan wax shaqo ah isku laheyn kiiska dacwadda badda Soomaaliya ee yaalla Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda (ICJ) iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee Kenya oo ay shalay dib usoo celisay.
Sidoo kale Hadalka mahdi ayaa ka danbeeyay saacado kadib Markii warar lagu faafiyey baraha bulshada iyo warbaahinta qaar oo sheegayey in labad dal ay kiiska badda ka gaarayaan xal ka baxsan maxkamadda, oo ay garwadeen ka tahay Qatar.
Office Nairobi Kenya .
Previous articleMadaxweynaha Midowga Afrika oo u magacaabay madaxwaynihii hore ee dalka Ghana inuu noqdo ergayga gaarka ah ee dhex-dhexaadinta Soomaaliya.
Next articleBeelihii shalay ku dagaalamay Gobolka Hiiraan oo Xabad joojin la dhex dhigay iyo Ciidamo la kala dhex dhigay
Members of Djibouti Fact-Finding Mission on the Kenya-Somalia dispute at the Kenya-Somali border to gather information required to resolve the row between the two...
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Rooble oo booqday dhaawacyada dadkii ku waxyeelloobay...